-DHAMMA RADIO CHANNELS / LIVE / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] DHAMMA RADIO CHANNEL5-...
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာပြုတက္ကသိုလ် ပါမောက္ခချုပ် ဒေါက်တာနန္ဒမာလာဘိဝံသ -
International Theravada Buddhist Missionary school professor...
Tags: professor Dr.Nandamalabhivansa - သာသနာပြုတက္ကသိုလ် ပါမောက္ခချုပ် ဒေါက်တာနန္ဒမာလာဘိဝံသ A - Arsaralinkarra - စစ်ကိုင်းရွှေဟင်္သာ အရှင်အာစာရလင်္ကာရ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] နုတ်ဆက်ပါ...
နုတ်ဆက်ပါတယ် သွားတော့ကွယ် တရားတော်
Tags: အရှင်အာစာရလင်္ကာရ(စစ်ကိုင်းရွှေဟင်္သာ) - ashinarsararlinkarra ashin_arsararlinkarra ashinachararlinkara ashin_achararlinkara sakaing sitkaing A - Arsaralinkarra - စစ်ကိုင်းရွှေဟင်္သာ အရှင်အာစာရလင်္ကာရ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] မိဘကျေးဇူ...
Tags: အရှင်အာစာရလင်္ကာရ(စစ်ကိုင်းရွှေဟင်္သာ) - ashinarsararlinkarra ashin_arsararlinkarra ashinachararlinkara ashin_achararlinkara sakaing sitkaing A - Arsaralinkarra - စစ်ကိုင်းရွှေဟင်္သာ အရှင်အာစာရလင်္ကာရ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] သံဃဂုဏ်ရည...
Tags: အရှင်အာစာရလင်္ကာရ(စစ်ကိုင်းရွှေဟင်္သာ) - ashinarsararlinkarra ashin_arsararlinkarra ashinachararlinkara ashin_achararlinkara sakaing sitkaing A - Arsaralinkarra - စစ်ကိုင်းရွှေဟင်္သာ အရှင်အာစာရလင်္ကာရ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] သန့်သန့်ေ...
သန့်သန့်လေးပဲ နေကြပါစို့ တရားတော်
Tags: အရှင်အာစာရလင်္ကာရ(စစ်ကိုင်းရွှေဟင်္သာ) - ashinarsararlinkarra ashin_arsararlinkarra ashinachararlinkara ashin_achararlinkara sakaing sitkaing A - Arsaralinkarra - စစ်ကိုင်းရွှေဟင်္သာ အရှင်အာစာရလင်္ကာရ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] အနီးမှာမေ...
Tags: အရှင်အာစာရလင်္ကာရ(စစ်ကိုင်းရွှေဟင်္သာ) - ashinarsararlinkarra ashin_arsararlinkarra ashinachararlinkara ashin_achararlinkara sakaing sitkaing A - Arsaralinkarra - စစ်ကိုင်းရွှေဟင်္သာ အရှင်အာစာရလင်္ကာရ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] တရားဦးဓမ...
Tags: အရှင်အာစာရလင်္ကာရ(စစ်ကိုင်းရွှေဟင်္သာ) - ashinarsararlinkarra ashin_arsararlinkarra ashinachararlinkara ashin_achararlinkara sakaing sitkaing A - Arsaralinkarra - စစ်ကိုင်းရွှေဟင်္သာ အရှင်အာစာရလင်္ကာရ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] အနှိုင်းမဲ...
အနှိုင်းမဲ့ အလှူ တရားတော်
Tags: အရှင်အာစာရလင်္ကာရ(စစ်ကိုင်းရွှေဟင်္သာ) - ashinarsararlinkarra ashin_arsararlinkarra ashinachararlinkara ashin_achararlinkara sakaing sitkaing A - Arsaralinkarra - စစ်ကိုင်းရွှေဟင်္သာ အရှင်အာစာရလင်္ကာရ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] ခေတ်သစ်ရှ...
Tags: အရှင်အာစာရလင်္ကာရ(စစ်ကိုင်းရွှေဟင်္သာ) - ashinarsararlinkarra ashin_arsararlinkarra ashinachararlinkara ashin_achararlinkara sakaing sitkaing A - Arsaralinkarra - စစ်ကိုင်းရွှေဟင်္သာ အရှင်အာစာရလင်္ကာရ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] အကြင်နာပေ...
အကြင်နာပေါင်း (၈၄၀၀၀) တရားတော်
Tags: အရှင်အာစာရလင်္ကာရ(စစ်ကိုင်းရွှေဟင်္သာ) - ashinarsararlinkarra ashin_arsararlinkarra ashinachararlinkara ashin_achararlinkara sakaing sitkaing Pages: 1234567 of 12